Ukuba inja yakho iya kuba neenwele, iya kuba yincinci, iindawo ezingenabunwele zivela emzimbeni, oku kungabangela ukukhathazeka. Kodwa musani. Ukunyusa iinwele kwiintshontsho, ukulahleka kwentloko kubakho rhoqo ngenxa yezizathu ezahlukahlukeneyo. Cinga ngezizathu zokulahleka kweenwele kunye nendlela yokujongana nayo.
Kutheni iinwele ziwela ezinja?
Kukho amaqela amabini ama-causes - engekho i-hormonal kunye ne-hormonal, engahambelananga nokungafezeki kweengqungquthela ze-endocrine. Masiqaphele indlela iinwele eziwela ngayo. Ukuba iinwele ziwela ngokulinganayo, ngoko kungenxa yezifo ze-hormonal. Ukuba ukulahlekelwa kweenwele ezingapheliyo kuboniswa, ke isizathu sihlukile.
Izifo zeHormon ezihamba kunye nokulahlekelwa kweenwele
Cushing's syndrome. Le yintlupheko yeenwele ezilinganayo emzimbeni wenja, kubangelwa ukugqithisa kwe-hormone cortisol. Ezinye iimpawu ziquka ukuzuza ubunzima, ukuvuthwa ngokugqithiseleyo nokunxanwa. Isisu sisincinci, sandisiwe. Ngamanye amaxesha le meko ivela ngenxa yokusetyenziswa kwezidakamizwa ze-steroid.
Ngenxa yokuphazamiseka kwemveliso ye-hormone yokukhula, iinwele ziwa ngokulinganayo kumacala omabini, ikakhulukazi kwindoda. Iyakwenzeka ngexesha lokutshatyalaliswa kwaye luphawu lweentlobo ezifana ne-Dutch wolf pomeranian, i-poodle, ibhokisi, i-airedale terrier, i-chow-chow.
I-Hyperestrogenism iyenzeka xa amadoda nabesifazana banesidumbu esiphezulu. Mhlawumbi ulahleko lweenwele ezijikelezileyo ezijikelezayo kunye nezidalwa zomzimba kunye ne-perineum.
I-Hypostrogen iyabonwa kwindoda ebesetyhini indala. Ulusu luba lula kwaye lube buthathaka, njengoluhlobo lomntwana. Ukucocwa kupheliswa kuwo wonke umzimba, ukukhula kweenwele kuncitshiswa.
I-Hypothyroidism ibonakala ngokusilela kwehomoni ye-thyroid. Inja ehluphekayo kwesi sifo iyaba yi-lethargic, ithola isisindo, iyakwazi ukuthintela izifo, inentlungu, inwele eyomileyo, kukho iipatches zokulahleka kweenwele. Esi sizathu esiqhelekileyo sokulahleka kweenwele ngaphandle kokubamba. Uboya buwela kwindawo yecala lomsila, umlenze, emuva, emacaleni omzimba, esifubeni, entanyeni.
Ezinye izifo ezikhokelela ekulahlekeni kweenwele kwizinja
Iimvumba ezininzi zichitheka ukusuka kwiinyanga ezintathu ukuya kwiinyanga ezili-10, kuxhomekeke kuhlobo loboya, ububele kunye nobukhulu. Kwezinye iintlobo zeenja, xa kuthelekiswa nezinye iintlobo, i-molting iyingozi kakhulu, ininzi. Umzekelo walezi zi-oranges: ngenxa yokulahleka kwentloko engafanelekanga, zibonakala ngexesha le-moult. Izinja ezikhulayo ze-moult zonyaka, kabini ngonyaka. Ngethuba lokunyuka, ukunyamekela nokucoca rhoqo kubaluleke kakhulu. Ukongezelela, amabhinqa atyelwa emva kokuzalwa kunye nexesha loxinzelelo lwesondo. Ukulahleka kweenwele ezinamandla kungenzeka kwizinja ngexesha lokugula, emva kokuhlinzwa, ngexesha loxinzelelo olunzima, okanye phantsi kwezinye iimeko ezibangela uxhalabo. Ukuhlamba rhoqo i-puppy, xa kusetshenziselwa izibilini, kunokubangela ukuba isikhumba esikhathekayo nesomileyo, ukunqunyulwa kweenwele.
Enyanisweni, phakathi kweenja, ukunyuka kwezilwanyana kuninzi. Ukuphendula kwe-allergen kukhula ibe yizinto ezihlukeneyo ekusebenziseni okanye ngokutya. Kodwa ngokuqhelekileyo i-allergies iyaqhubeka xa inja okanye intsana inikwe into engavamile okanye entsha.
I-Ringworm yintsholongwane yefungal. Ikhutshwe nge-crust, scaly, kwiindawo ezijikelezileyo, ukuya kwi-50 mm ububanzi. Phakathi kwendawo enjalo, ukulahleka kweenwele kunye nomngqomvu obomvu ekugqibeleni kuya kugcinwa.
I-Scabi isifo esibangelwa izilwanyana ezincinci. Kukho iindidi ezi-2 ze-scabi - izifo zedemodectic kunye ne-sarcoptic infections. Ngokuqhelekileyo i-demodicosis iyenzeka kwizinja eziselula, xa iintsapho zilahlekelwa yintlungu, zihlolwe ukuba zine-demodex pliers. Ukongeza, inja ingaba ne-intshi encinane. Izinja ezineenkathazo ze-sarcoptosis kwaye zibuhlungu kakhulu. Ngenxa yokutshitshiswa kweenwele kunokuba lukhulu. Ukufunda kuphela okhethekileyo kuya kunceda ukufumana ukuba yeyiphi iikhegi inja.
Ukuba unenkxalabo malunga nokulahleka kweenwele kwi-pet yakho, kwaye uyazi ukuba le nto ayiyiyo i-moult, kuya kuba ngcono ukudibana nodokotela wezilwanyana. Utywala, nayiphi na isifo kufuneka sifumaneke kwaye siphathwe ngokukhawuleza. Kuya kuba yinto eshibhile kuwe kwaye kulungele inja, kunokuba uya kukhokelwa ngumgaqo, unokukwazi ukudlula.
Yonke into malunga nohlobo lwehlathi lehlathi laseNorway
Isaladi ye "Easter"
I-Grechaniki eneqanda elithwalayo
I-podklady ibonakala njani njengengozi: Isexwayiso, yingozi kakhulu. Khangela ukuba umntu unokukulimaza
Inyanga yesithathu yokuphuhliswa kwabantwana
Ukutya abantwana emva kokutyhefuza
Ukupheka isitya se-lagman
Ungayilahla njani iibhugi kwi-croup?